Otú e si edozi ya mgbe iPod Ga-mmekọrịta faịlụ na iTunes? iPod bụghị a ghọtara
Mgbe m ikwunye m iPod m kọmputa ọ na-adịghị mmekọrịta ọzọ na m nwere ike tinye ma ọ bụ hichapụ songs ọzọ n'ihi na ọ bụ dị ka ọ bụrụ na m iPod na-adịghị na-ghọtara site iTunes. Ọ ka na-ebubo m iPod ma m chọrọ ka ịgbakwunye ọhụrụ songs m iPod ma ike n'ihi na ọ gaghị mmekọrịta!
Ihe ịkụ afọ n'ala, na iPod agaghị mmekọrịta na iTunes? Ọ bụ n'ezie na-akụda mmụọ, karịsịa mgbe iTunes bụ nanị onye na ị mmekọrịta faịlụ gị iPod na. Echegbula. Mgbe ụfọdụ iTunes na-akpa àgwà dị ka nke a, ma i nwere ike ịgbalị idozi ya. Ke ibuotikọ emi bụ ụfọdụ Atụmatụ, nke m Olileanya ha ga-arụ ọrụ gị.
1st usoro: Lelee iTunes version na eriri USB
2nd Method: ikike gị iTunes na kọmputa
3rd usoro: Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa ma ọ bụ reboot gị iPod
4th usoro: Tọgharia na weghachite iPod
5th usoro: mmekọrịta iTunes na iPod site WiFi
6 usoro: mmekọrịta iPod na a ọzọ ngwá ọrụ
Nweta nkwalite iTunes ka Kacha ọhụrụ otu
Ihe mbụ i nwere ike ime mgbe iPod agaghị mmekọrịta ka iTunes bụ na-elele iTunes version na kọmputa gị. Ọ bụrụ na e nwere ihe a ọhụrụ mbipute dị, ị kwesịrị iji kwalite iTunes ka Kacha ọhụrụ otu.
Gbanwee a eriri USB
Lelee iPod eriri USB site ịkwụnye ya anya na nkwụnye ya na kọmputa ọzọ. Mgbe ọ ka na-adịghị arụ ọrụ, ị nwere ike ịgbanwe ọzọ eriri USB na nwere a-agbalị. Mgbe ụfọdụ, ọ ga-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na iTunes agaghị mmekọrịta na iPod, ọ dị mkpa iji jide n'aka na kọmputa gị na-ikike, karịsịa mgbe ị jikọọ gị iPod on a ọhụrụ kọmputa. Open iTunes. Pịa ụlọ ahịa na-egosi ya esiri-ala menu. Pịa ikikere nke a Computer ... na ndenye gị Apple ID. Ọ bụrụ na ị mgbe ikike kọmputa, ị nwere ike mbụ deauthorize a na kọmputa na ikike nke a nke abụọ oge.
Mgbe ị na-enyocha mbụ na nke abụọ ụzọ, ma iPod agaghị mmekọrịta na iTunes, i nwere ike ịgbalị usoro a.
Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa
Ọ bụ manụ Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa, ma ị ga-ahụ na mgbe ụfọdụ ibidogharịa kọmputa ga-idozi nsogbu na-iTunes na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ na gị iPod na-adịghị eme nke ọma, i nwere ike gbanyụọ ya na reboot ya ọzọ. Ozugbo iPod na agbanwuru, ị nwere ike na-agbalị ka mmekọrịta ya na iTunes.
Ka nwere nsogbu banyere iPod bụghị syncing na iTunes? Gbalịa iji tọgharịa gị iPod ma weghachi ya mgbe e mesịrị. Tupu resetting, ị ga ndabere gị iPod ka iCloud ma ọ bụ iTunes. Mgbe ahụ, na gị na iPod, mgbata Setting> General> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na Mwube. Na, na, weghachi gị iPod na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Ke akpatre, ego ma iTunes nwere ike mmekọrịta gị iPod ma ọ bụ.
Emekarị na-eji eriri USB? Agbalị iji WiFi mmekọrịta ugbu a. Gị iPod nchịkọta dialog na iTunes na kọmputa, nne Mmetụta mmekọrịta na nke a iPod n'elu WiFi. Mgbe ahụ, na gị na iPod, mgbata Setting> General> iTunes Wi-Fi mmekọrịta> mmekọrịta ugbu a.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ghara mmekọrịta iPod ka iTunes mgbe agbalị ụzọ n'elu ma ọ bụ na ị chọrọ ka nwere ihe mfe ụzọ mmekọrịta iPod, ị nwekwara ike iji a ọzọ ngwá ọrụ. E nwere otu nke na-arụ ọrụ dị ka iTunes na ike ime ihe iTunes ike. Ọ na-aha ya bụ na Wondershare TunesGo (Windows) ma ọ bụ TunesGo (Mac).
Cheta na: Na Windows version, ị nwere ike mmekọrịta ọzọ faịlụ gụnyere kọntaktị, na SMS karịa gị na-eme na Mac version.
Nzọụkwụ 1. Launch a software na jikọọ na gị iPod
Ka dị nnọọ na Windows version dị ka a na-agbalị, mgbe Mac version na-arụ ọrụ a yiri nke ahụ. Wụnye na ẹkedori a software na kọmputa. Jiri eriri USB jikọọ gị iPod na kọmputa. Nke a software ga iṅomi gị iPod anya ma na-egosi ya na isi window.
Nzọụkwụ 2. mmekọrịta iPod na kọmputa
Mmekọrịta faịlụ site na kọmputa na-iPod na-enweghị ọnwụ
Na ekpe kọlụm, dị ka ị na-ahụ, e nwere ọtụtụ taabụ. Pịa otu taabụ na ị ga-ya kwekọrọ ekwekọ window.
Site na ịpị Media,
ị nwere ike mmekọrịta music, fim, Podcast, iTunes U, audiobook na music video gị iPod. Site na ịpị Playlist,
ị nwere ike mmekọrịta listi ọkpụkpọ site na kọmputa ma ọ bụ iTunes ka iPod. Pịa Photos ka mmekọrịta gị foto gị iPod.
Click Ndi ana-akpo ka mmekọrịta kọntaktị site na a vCard / Outlook / Outlook / Windows Akwụkwọ Adreèsị / Windows Live Mail gị iPod.
Mmekọrịta iPod faịlụ ka kọmputa
Ihe kacha ụzọ mmekọrịta music na ndị ọzọ ọdịyo na video ka iTunes na kọmputa bụ iji shortcut isi - Copy iDevice ka iTunes na Export Music ka nchekwa.
Mmekọrịta audio & video ka iTunes: pịa Copy iDevice ka iTunes> Malite> nne Mmetụta gị chọrọ faịlụ> Detuo na iTunes
mmekọrịta music na kọmputa: Pịa Export Music ka nchekwa.
Mmekọrịta faịlụ na iPod na kọmputa n'ụzọ dị otú a:
-Abịa azụ ekpe kọlụm. Karị pịa taabụ. Mgbe ahụ, na ha management window, ego Họpụtara faịlụ na mbupụ ha.
Olee otú Tranfer iTunes égwu ka Android
> Resource> iTunes> Olee dozie ya mgbe iPod Ga-mmekọrịta faịlụ na iTunes?